उत्कृष्ट यौन जीवनका लागि मेथी - पब्लिक समाचार
११ महिना अगाडि / १३५६ पटक हेरिएको
एजेन्सी । खराब जीवनशैली, तनाव, एन्जाइटी जस्ता समस्याहरुका कारण मानिसको यौन जीवनमा समस्या आउँछ । महिलाहरुमा पनि दैनिक जीवनमा आउने विभिन्न समस्याले यौन सम्बन्धी समस्या आउँछ । महिलाहरुमा सेक्स ड्राइभलाई बुस्ट गर्न लागि भान्सामा पाइने मेथी निकै महत्त्वपूर्ण हुने एक अध्ययनले बताएको छ ।
अध्ययनका अनुसार खाना तथा तरकारीमा प्रयोग हुने मेथीले महिलामा मेनोपोजसँग जोडिएका समस्याहरुलाई पनि कम गर्छ । अध्ययनले ५०० मिलीग्राम मेथी सेवन गर्ने महिलाको सेक्स लाइफसँग जोडिएका समस्या ४२ प्रतिशत कम हुन्छ ।
यसका साथै, जुन महिलामा यौनसम्पर्कको समयमा पीडा महसुस हुने, सुख्खापन हुने जस्ता समस्या छ ति महिलाले हर्बल सप्लिमेन्टको रुपमा मेथीको नियमित सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, महिनावारी हुने महिलाहरुले दिनमा दुई पटक अर्गानिक मेथी खाने गर्नुपर्छ ।
विशेषज्ञका अनुसार अर्गानिक मेथीबाट बनेको पेयपदार्थले हर्मोनलाई सन्तुलनमा राख्छ । यसले शरीरमा टेस्टोस्टेरोन र एस्ट्राडियोल नामक हर्मोनलाई पनि बुस्ट गर्छ ।
विशेषज्ञले टेस्टोस्टेरोनल हर्मोन यौन इच्छा बढाउन र यसलाई कायम राख्न मद्दतगार मानिन्छ । यति मात्र होइन यौन सम्पर्कको समयमा ल्यूब्रिकेशन, सेन्सेशन र ब्लड फ्लोलाई पनि सन्तुलनमा राख्छ ।
अनुसन्धानकर्ताका अनुसार अर्गानिक मेथीले सामान्य हर्मोनलाई सन्तुलनमा राख्ने काम गर्छ । यसको लगातार सेवनले यौनसँग जोडिएका समस्याहरुलाई कम गराउँछ ।
अनुसन्धानकर्ताका अनुसार मेथीलाई एन्टी इन्फ्लेमेटरी र लिभिडो बुस्टिङ गर्नको लागि औषधिको रुपमा लिइन्छ । यसको प्रयोग एशियाली देशहरुमा खानामा प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
मेथीले सेक्स हर्मोन बनाउन मद्दत गर्छ । जसमा एस्ट्रोजन र टेस्टोस्टेरोन पनि एक हो । ३० व्यक्तिहरुमा ६ हप्तासम्म गरिएको अध्ययनका अनुसार ६०० मिलिग्राम मेथीको सेवनले यौन इच्छा र यौन कार्यमा सुधार ल्याउँछ ।
शनिबार, साउन ३०, २०७८मा प्रकाशित गरिएको
९० वर्षीया बृद्धाको अध्ययनमा यस्तो मोह
चार दिनदेखि बन्द रहेको जिल्ला अस्पतालको सेवा सोमबारबाट सूचारु
से’क्स गर्दा महिला धेरै आकर्षित हुने यी हुन् ५ पोजिसन
मोटो शरीर स्लिम बनाउन के गर्नु पर्ला ? यो पढ्नुहोस
के तपाईको स्मोरण शक्ति कम छ ? यी आठ तरिकाले बढाउनुहोस् दिमागको क्षमता
मान्छेको नङमा सेतो आका हुनुको अर्थ के ? पढ्नुहोस
नेपालमा मात्र पाईन तर नेपालीले नचिनेको अमुल्य औषधी, यस्ता ठुला रोगहरु निको पार्छ